International Archives - Page 8 of 62 - Popular
အတူတူ ပွဲတက်ခဲ့တဲ့ Hyun A နဲ့ E’Dawn
နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့က ဆိုးလ်မြို့ Gangnam မှာ ပြုလုပ်တဲ့ Jimmy Choo ပွဲကို Hyun A နဲ့ E'Dawn တို့နှစ်ယောက် အတူတူ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါက သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ပထမဆုံးအတူ…
BTS ရဲ့အဖွဲ့ဝင် Jin ဟာ သူ့ရဲ့ ၂၆ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ အလှူပြု လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ မွေးနေ့မှာ . . .
ဒီလို အထင်ခံနေရတဲ့ ရှောင်း မန်းဒက်စ်က တော်တော်လေး စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်နေရပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းထဲမှာပဲ ရိုးလင်းစတုန်း မဂ္ဂဇင်းနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး အင်တာဗျူးခဲ့ရာမှာ သူ့ကို မိန်းမလျာလို့ အထင်လွဲနေတာကို ချေပတဲ့အနေနဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ ချိန်းတွေပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး သူ့ပရိသတ်တွေဆီကို…
ကမ္ဘာကျော် နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဘော့ဒိုင်လန်နဲ့ နေးလ်ယန်းတို့ လန်ဒန်မှာ ပူးတွဲဖျော်ဖြေဖို့အစီအစဉ်ရေးဆွဲနေ
ဒီလို ပူးတွဲဖျော်ဖြေတာမျိုးက အခုတစ်ကြိမ်က ပထမဆုံးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ရှေ့ကာလတွေမှာလည်း ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါသေးတယ်။ အခု လာမယ့်နှစ် ဖျော်ဖြေပွဲကို လာမယ့်နှစ် . . .
မကြာသေးခင်ကမှ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ဘောလိဝုဒ် မင်းသားကြီး ဆန်နီ ဒီအိုးလ်က သူ့ရဲ့ရုပ်ရှင်သက်တမ်း ၃၅နှစ် အတွင်းမှာ ဘယ်တော့မှ ဇာတ်ညွှန်းကို ဖတ်မကြည့်ခဲ့ဘူးလို့ဝန်ခံပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ 'ဇာတ်ကားတစ်ကားကို သရုပ်ဆောင်ရတော့မယ်ဆိုရင် . . .
၁၉၉၄ ခုနှစ်က ရုံတင်ပြသခဲ့ဖူးတဲ့ “Lion King” အန်နီမေးရှင်း ကာတွန်းဇာတ်ကားကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ နည်းပညာ တွေသုံးပြီး သဘာဝနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးတူအောင် ပြန်လည်ရိုက်ကူးထား တယ်လို့ သိရပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ရက်နေ့က ထုတ်လွှင့်ပြသသွားတဲ့ နောက်ဆုံး အပြီးသတ် နမူနာအပိုင်းလေးကို…
မန်ဒီမိုးနဲ့တေလာဂိုးလ်းစမစ်တို့နှစ်ဦး ရိုးရိုးရှင်းရှင်း မင်္ဂလာပွဲကျင်းပ
အစပိုင်းက ဒီလောက် မြန်ဆန်သွား လိမ့်မယ်မထင်ခဲ့ဘူး အခုတော့ မင်္ဂလာပွဲကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း လေးပဲ ဖြစ်ချင်တာ ထုံးစံအတိုင်းတွေ လိုက်လုပ်ရတာ စိတ်ရှုပ်စရာကောင်း တယ်။ အခုတော့ ဆုတောင်းပြည့် ပြီလို့ ဆိုပါတယ်။မန်ဒီက...
ဂျပ်စတင် ဘီဘာ ရဲ့  မိခင်က ချွေးမလောင်းအတွက်မွေးနေ့ ဆုတောင်းရေးသား
ဘော့ဒ်ဝင်အတွက် အတိုင်းအဆမသိတဲ့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုကို ယောက္ခမလောင်းဖြစ်သူ ပက်တီမော်လက်က သူ့ရဲ့ Instagram က နေတစ်ဆင့် မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဂျပ်စတင် ဘီဘာရဲ့ မိခင်ပက်တီမော်လက်ရဲ့Instagram မှာတော့ တိုတိုနဲ့လိုရင်းပါပဲ ''ငါမင်းကို....